ezemidlalo | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: le midlalo
Eyona mithambo ilungileyo yeempundu - ukujija iesile ngokuchanekileyo
ezaposwa ngomhla 24.07.2021 24.07.2021
Nokuba kusehlotyeni okanye kubusika ngoku, uhlala uqeqesha iesile lakho! Iseti yomthambo yophuhliso olusebenzayo lwezihlunu zeempundu!
Indlela yokwehlisa ubunzima ngaphandle kokulimaza impilo
ezaposwa ngomhla 11.01.2021 02.02.2021
Umzimba womntu yinkqubo eguqukayo ethi isabele ngoko nangoko kulo naluphi na utshintsho kwindlela eqhelekileyo yobomi. Ukunciphisa umzimba ngaphandle kokulimaza impilo, umntu kufuneka ahambelane nemithetho ethile elula.
Indlela yokulandela ukutya kwe-plum yokunciphisa umzimba
ezaposwa ngomhla 14.10.2019 14.10.2019
Ekwindla, enye yeendlela zokutya ezidumileyo yiplum. Isivuno esityebileyo seplums ezivuthiweyo nezisempilweni zikuvumela ukuba usebenzise iziqhamo kwiindlela ezahlukeneyo zokutya: ngokukhawuleza, ngokude, nge-mono okanye ngokudibeneyo. Ukutya okuyiPlum: izibonelelo zokuphulukana nobunzima kwi ...
UDmitry Sychev: I-biography kunye nobomi buqu bomdlali webhola
Umdlali webhola odumileyo uDmitry Sychev wazalelwa eTomsk ngo-Okthobha 26, 1983. Uthando lwebhola ekhatywayo lwafakwa kuDima omncinci nguyise, owayehlala eyisa inkwenkwe ebaleni kwaye efundisa ubugcisa ...
A. N. Maltsev, umdlali weHckey: i-biography, ubomi bomntu, isithombe
Ukuqala kweminyaka yama-70 kwaba linyathelo elitsha kuphuhliso hockey yiSoviet. Ingqwalasela eyodwa ihlawulwe kulo mdlalo. Kwagqitywa kwelokuba ihoki ifuna isiseko esiqinileyo sethiyori. Iziphumo zoku ...
Ungazikhetha njani iibhuki zentsimbi? Iibhulukhwe zeebhutsi zeski
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 28.10.2019
Kuqeqesho lokuskiya, unokuqesha izixhobo. Kodwa ukuze ufunde ngokunzulu, kungcono ukuba nezixhobo zakho. Unonophelo olukhethekileyo kufuneka lwenziwe xa ukhetha iibhutsi ze-ski. Ubungakanani bazo abuhambelani ...
URashguard - uyintoni kwaye uyenzela ntoni?
Imbaleki nganye, kuxhomekeke kuhlobo luphi lwemidlalo ebandakanyekayo kuyo, kufuneka ibe nezixhobo ezizodwa. Ukuba sithetha ngabalwi bezitayile ezixubekileyo, uya kuhlala ubona okhethekileyo ...
Ukutyiwa kwemifuno kungene ebomini babantu njengendlela yokuphila engamkeli naziphi na iimveliso zezilwanyana. Ngokuhamba kwexesha, izimvo zabalandeli kule ndlela yokutya itshintshile, umntu waqala ukusebenzisa amaqanda nobisi, kodwa hayi ...
Ukufuya ii-dumbbells zilele kwi-bench ethambekele: ukuziqhelanisa kunye nobuchule
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 29.10.2019
Ukuphakamisa i-dumbbells ngezandla zakho kwindawo efanelekileyo kukuzilolonga ngokufanelekileyo ukuze usebenze kakuhle kwinxalenye yemisipha ye-pectoral ebekwe ngaphezulu. Nangona kunjalo, ungaphazami ukuba oku kwanele ukushiya kwaye ...
Yeyiphi ikhamera yokwenza? Uphengululo kunye nengcebiso yengcali
I-camcorder inceda abantu ukuba babambe awona maxesha abalulekileyo ebomini kwimemori khadi ukuze bakwazi ukubuyela kwakhona nangaliphi na ixesha. Kukho iimeko apho isishicileli esiqhelekileyo sevidiyo okanye ...
Umatshini ozenzekelayo we-OTs-14 "Iindudumo": iifoto kunye neempawu
Ngaphambi kokuchaza umatshini we-OTs-14 "Iindudumo" uqobo, kufanelekile ukuba uthethe kancinci malunga nenkqubo ye-bullpup. Yayilwa kudala kwaye bazama ukuyiphumeza rhoqo, kodwa, ngenxa yemisebenzi yayo ekhethekileyo, ...
I-KHW Snow Baby Dream iselwe: uphononongo, inkcazo, iindidi kunye nokuphononongwa
Ewe, ubusika bufikile, kunye nokuzonwabisa kwesiko ngeli xesha! Abazali bazama ngamandla ukukhuphela ngaphandle inzala yabo esitratweni, bebanyanzela ukuba batshintshe iscreen esiblowu siye kwinto eqhelekileyo kwabadala ...
Izifo - yintoni? Indlela yokulahla ukukhathazeka?
"Owu, milenze," iingcinga zigcwele entlokweni yam njengoko umzimba unyuka kwizinyuko. "Owu, isisu!" -Iza engqondweni xa uzama ukuphinda uqeqesho lothutho lwayizolo. "Oh-oh-oh, buyela" - xa uzama ukunyusa ...
I-Persimmon yokunciphisa umzimba. Iipropathi eziluncedo ze-Persimmon, ezinegalelo ekunciphiseni ubunzima
Ekuqaleni kuka-Okthobha, iziqhamo ezinkulu ezikhanyayo zeorenji zivela kwiimarike nakwiivenkile. Le persimmon ethandekayo. Ilizwe lawo yiChina, kodwa ngoku ikhulile naphina apho kukho ubushushu nokukhanya okwaneleyo. ...
Ukuzingela entwasahlobo. Ixesha lokuzingela kwentwasahlobo
Ukuzingela entwasahlobo kuyaqhubeka okwexeshana. Eli lixesha lokuvuswa kwendalo. Ukudinwa nobusika kuyaphela. Amawakawaka amadoda, echwayitile ephosa imipu yawo emagxeni, abalekela ehlathini, kumgxobhozo nasemachibini. E…
Yeyiphi imisipha esebenzayo xa uhamba? Izibonelelo zokuhamba
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 19.10.2019
Ukuhamba yeyona ndlela yendalo yokuba abantu bajikeleze. Izazinzulu kudala zangqina ukuba ukuhamba kubalulekile ukuze uhlale usempilweni. Wonke umntu ufuna ukuhlala ekwimeko elungileyo kunye neemvakalelo ezilungileyo, ukuze azive enamandla ...
Yintoni ekufuneka uyazi xa ukhetha iigloves zebhokisi yaseThai
Ukuze uphumelele kulo naluphi na uhlobo lobugcisa bemfazwe, okokuqala, uqeqesho olude nolunzima luyafuneka. Kodwa ngaphandle komsebenzi wemihla ngemihla, ukukhethwa kwezixhobo ezifanelekileyo kudlala indima enkulu. Oku kuyinyani ngokukodwa kwiintlobo ezithile ...
Ndifuna ukunciphisa umzimba, kodwa akukho mandla? Ukuba ufuna njalo, yonke into ngokuqinisekileyo iya kuphumelela!
"Ndifuna ukunciphisa umzimba, kodwa akukho mandla" - esi sesona sizathu sobuxoki sokuba abantu abatyebe ngakumbi bazifihle ngasemva. Bakhangela izizathu zokuba bazilandele kwaye balandele ukhokelo lobuvila babo. Ewe, ...
Page 1 Page 2 ... Page 136 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-78 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,356.